'राम्रो' काम गर्न खोजिरहेका 'ब्याड'... :: समिक्षा अधिकारी :: Setopati
'राम्रो' काम गर्न खोजिरहेका 'ब्याड' जोडी
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, असार ५
दीपेश फुँयाल (बायाँ) र विवेक गौतम गीतको भिडिओ खिच्ने तयारीमा। तस्बिर सौजन्यः दीपेश
धूलो, मैलो, हिलो, फोहोर, खेल्न जानु हुन्न..हात नधोई केही कुरा त्यसै खानु हुन्न.. बाबुनानीले हो..बाबुनानीले..मिच्दै हात धुनू है साबुनपानीले..।
कोरोना भाइरसको औषधि बनिसकेको छैन। साबुनपानीले हात धुने र स्यानिटाइजर प्रयोगले भाइरस जोखिम कम हुने विश्व स्वास्थ्य संगठनले बताएको छ। तर, साना नानीबाबुलाई यो कुरा बुझाउन कहाँ सजिलो छ र! धूलो-मैलोमा खेल्न रूचाउने केटाकेटीको बानी सुधार्न सिन्धुली कमलामाई नगरपालिकाका दिपेश फुँयालले गजबको उपाय निकालेका छन्।
उनले नानीबाबुले गाउने भाकामै सन्देशमूलक गीत तयार पारेका छन्। माथिका हरफ उनैको गीतबाट लिइएको हो। यो गीत अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै रुचाइएको छ। लकडाउन सदुपयोग गर्दागर्दै जन्मिएको सिर्जनाले अहिले धेरैको मन जितेको छ।
'भिर्ने झोलामा' गीतबाट लय सापटी लिएको यो गीतले साना केटाकेटीलाई हात धुन र सफा रहन प्रेरित गरेको दीपेश बताउँछन्। नानीबाबुको आनीबानी बदल्न सिकाउने उद्देश्यले बनाइएको भिडिओमा बालबालिकाले नै अभिनय गरेका छन्।
गीत गाउन, संगीत भर्न र भिडिओ बनाउन दीपेशलाई साथी विवेक गौतमको सहयोग छ। यसमा विवेकले बिट-बक्सिङ (मुखबाटै संगीतका धून निकाल्ने) गरेर संगीत दिएका छन्।
लकडाउनमा समय कटाउन मुश्किल भएपछि केही नयाँ काम गर्ने धुनमा विभिन्न गीत बनेका दीपेशले सेतोपाटीसँग बताए।
विवेक गौतम (बायाँ) र दिपेश फुँयाल। तस्बिर सौजन्यः दीपेश
त्यसो त उनीहरूले यो गीतभन्दा पहिले 'फुल्यो बामरी' भाका पछ्याउँदै 'लकडाउन सकिन्छ, बस रामरी' गीत सार्वजनिक गरेका थिए। गाउँघरका केटाकेटीले शब्द टिपेर गाउन थालेपछि उनीहरूलाई नै हुने अर्को गीत तयार पार्ने सोच आयो। त्यसैले 'साबुनपानीले' बोलको गीत फुरेको उनी बताउँछन्।
'सबैले सुनून् र यसबाट केही सिकेर व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरून् भनेर सन्देशमूलक गीत बनाएका हौं। विशेषगरी नानीबाबुका लागि,' दीपेश भन्छन्, 'जसरी सन्देश फैलाउने हिसाबले गीत बनाएका थियौं, त्यस्तै भइरहँदा खुसी लागेको छ। अर्को शब्दमा भन्दा भाइरल हुने रहर पनि हो।'
दीपेश र विवेक मिलेर कोरोना लकडाउन अवधिमा रमाइला र जनचेतनामूलक १० वटा गीत बनाएर उनीहरूको युट्युब च्यानलमा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। उनीहरूले आफ्नो नाम 'ब्याड जोडी' राखेका छन्। युट्युब च्यानलको पनि यही नामको छ। अंग्रेजी शब्द ब्याडको अर्थ खराब भन्ने हुन्छ। तर समाजमा चेतना फैलाउने उद्देश्यले 'राम्रो' काम गरिरहेका विवेक र दीपेशको नामबाट 'बि' एन्ड 'डी' लाई छोट्याएर उनीहरूले ब्याड जोडी नाम राखेको बताउँछन्।
दीपेश भन्छन्, 'नामको अर्थ खराब भए पनि काम राम्रो छ है भन्ने सन्देश दिन पनि यो नाम राखेका हौं।'
उनीहरूले बनाएका गीतमध्ये ४ वटा त स्वास्थ्य र सरसफाइ सम्बन्धी नै छन्। 'साबुनपानीले' गीत पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको हो। यो गीत युनिसेफ नेपालको फेसबुक पेजमा पनि सेयर भएको छ।
केटाकेटीले आफ्नो गीत गाउन थालेको सम्झँदै दीपेश थप्छन्, 'हात धोऔं, सफा रहौं भन्ने विश्वव्यापी अभियानबारे गीतबाट पनि सचेत गराउन साबुनपानी गीत बन्यो।'
२२ वर्षे दीपेश शिक्षा संकायमा स्वास्थ्य मुख्य विषय लिएर सिन्धुलीमै पढिरहेका छन्। १८ वर्षीय विवेक पनि सिन्धुलीमै इन्जिनियरिङ गर्दैछन्। अरू बेला पढाइमै समय जान्थ्यो। लकडाउनमा काम र पढाइ दुवै बन्द भएपछि विवेकले नै यस्तो सिर्जनात्मक उपाय निकालेका हुन्।
दीपेशले पहिलो गीत लकडाउनका कारण मानिसहरू धमाधम गाउँ फर्किरहेका दृष्य टिपेर सिर्जेका थिए।
'कोरोनाले थन्क्यायो कोठामा, भैंसी पालम् जस्तो छ गोठमा..के काम गर्ने भनेर सोच्दासोच्दै गीत बनेछ,' पहिलो गीतका शब्द सुनाउँदै दीपेश भन्छन्, 'धेरैको समस्या सम्बोधन भएछ कि, सबैले राम्रो भने। अनि हामीलाई उर्जा मिल्यो।'
पहिलो गीतलाई साथीहरूले रुचाएपछि दीपेश र विवेक समसामयिक विषयमा रचना गर्न जुटे। दीपेशका शब्द र स्वरमा विवेक बिटबक्स गर्ने भए। यी दुईको यही मिलेमतोका कारण पनि गीत रुचाइएको छ।
'दीपेशले गीत गाउँछन्, लेख्छन् भन्ने थाहा थियो। मैले पनि बिटबक्स अभ्यास गरिरहेको थिएँ,' विवेकले सेतोपाटीसँग भने, 'मैले नै तिमी गीत गाऊ, म बिटबक्स गर्छु भनेँ।'
गीतको भिडिओ खिच्न उनीहरू कहिले रूखमा मोबाइल बाँध्छन्, कहिले पोलमा। तस्बिर सौजन्यः दीपेश
यसरी बनेको ब्याड जोडीले अरूका गीत गाउनुभन्दा लय टिपेर शब्द आफैं सिर्जना गर्ने निधो गरे। लोक भाकामै रमाइला र समसामयिक गीत बनाउन जोड दिए। वैशाख पहिलो साता 'लकडाउन सकिन्छ, बस रामरी' गीत बनाएर फेसबुकमा राखेपछि नसोचेको तारिफ पाएको दीपेश सुनाउँछन्।
पहिलो र दोश्रो गीत मै राम्रो प्रतिक्रिया आएपछि २ महिनामा १० वटा छोटा गीत बनाइसके। रोचक त के छ भने, एक गीतको शब्द बनाउन दीपेशलाई करिब एक घन्टा मात्र लाग्छ रे। विवेकले पनि गीतको भाका तयार भएको एक घन्टामा बिटबक्सको लय समाउने उनीहरू बताउँछन्।
स्कुल पढ्दादेखि नै गजल-कविता लेख्ने दीपेशको बानी र युट्यबु हेरेर बिटबक्स सिक्ने विवेकको बानीले नै आफूहरूको यो यात्रा तय गर्न सहयोग पुगेको उनीहरू बताउँछन्। समय र रूचि मिलेपछि ‍के चहियो र!
'म पहिल्यैदेखि गजल-कविता लेख्थेँ र सानो सानो प्रसंगलाई गीतमा ढाल्न खोज्थेँ,' दीपेश भन्छन्, 'लकडाउनले प्रतिभा तिखार्न सहयोग गर्यो। अब झन् सिर्जना गर्न सिक्छु।'
अहिले ब्याड जोडीले सामान्य मोबाइलबाट नै भिडिओ खिचिरहेका छन्। मोबाइललाई टेपको सहायताले रुख, भित्ता वा लुगा सुकाउने डन्डीमा टाँसेर भिडिओ खिच्छन्। सम्पादनको काम विवेकले सम्हाल्छन्। यसरी सामान्य ढंगमा काम गरिरहेको यो जोडी आगामी दिनमा पनि मागअनुसार समय-सान्दर्भिक सिर्जना गरिरहने बताउँछ।
उनीहरू भन्छन्, 'अहिले हामीले आफ्नो रमाइलोका लागि गीत बनायौं, भोलिका दिनमा फरक किसिमले सिर्जना देखाउँछौं।'
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ५, २०७७, ०६:०८:००